Raha tsiahivina, taorian’ny vela-pandriky ny mpitandro filaminana, mpanao hosoka iray no tratra ambodiomby nampiasa vola sandoka teny Ankadilalana, Ambohimangakely, Avaradrano, ny alarobia 12 jona. Jiolahy efatra hafa mpiray tsikombakomba taminy ihany koa no sarona.Ilay vola 20.000Ar vaovao no fanaovan’izy ireo hosoka. Nahatrarana ravim-bola sandoka mitentina 1.880.000 ariary tany amin’izy ireo. Tratra ihany koa ny môtô iray izay tsy mazava ara-taratasy ary ahiana tafiditra amin’ny raharaha ny hosoka ka novidiana tamin’ny vola sandoka. Maripahaizana hosoka sy naoty any am-pianarana na “Relévés des notes” maro koa no tra-tehaka tamin’ny fanadihadiana lalina notanterahin’ny zandary.